Fiilmiin Asaantii Sadaasaa 15 Minisootatti Eebbifame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Bashannana Fiilmiin Asaantii Sadaasaa 15 Minisootatti Eebbifame
Fiilmiin haarawa Afaan Oromo Asaantii jedhamu dhuma baatii kanaa irratti biyya Ameerikaa magaalaa Minisootatti Sadaasaa 28 fi 29 galma tiyaatiraa keessatti ummatatti akka agarsiifamu barame.
Asaantii jechuun jecha Afaan Oromoo as aanti, natti as aanti, jedhu irraa fudhatamuu isaa kan dubbatti Keeyriyaat Yuusuf dayrekteriin fiilmicha kanaa.
Keeyriyaat Yuusuf barnoota tiyaatiraan erga eebbifamtee as yeroo addaddaatti Biiroo Aadaa fi Beeksisa Oromiyaatiif hojjataa turte. Oromiyaa keessa naannawaa, Keeyriyaat Yuusuf, tiyaatiroota ummata heddu agarsiisaa turte. Tiyaatiroonni akka Gumaa, Araddaa aabbaa, Daawwiitii Jireenyaa kanneen isiin irratti hojjatte keessaa muraasa isaaniiti.
Yeroo dheeraadhaafis hawwii fiilmii Afaan Oromoo hojjachuu kan qabdu ta’uu kan dubbattu Keeyriyaat Yuusuf, amma kunoo hawwiifii aabjuun isii dhugaa ta’ee fiilmii Asaantii xumura irraan gayuu isiitiin.
‘Dubartii ta’anii hojii fiilmii kana irratti bobba’uun waan salphaa hinturre…keessumattuu karaa aartii kanaan,’ jetti Keeyriyaat. Xiiqiijn isii qabe akka sadarkaa kanaan isii gaye himti.
Gaazexeessitoonni bebbeekamoon kanneen akka Muhaammad Ahmadii fi Shifarraa Hinsarmuu irraa deeggarsaa fi hamilee guddaa akka argatte dubbatti, Keeyriyaat.
Asaantiin fiilmii asoosama seenaa dhugaa irratti hundaayeedha. Fiilmiin, wolumaagalatti guddinni aartii oromoo, guddina oromoo, aadaa fi afaan isaati.
Previous articleYayaa Turee taphataa Aafrikaa ta’uudhaan muudame
Next articleFiilmiin Ajaa’iba jedhamu Gurraandhala 2015 bayuuf jira